जात ढाँटेर जव मैले दलित साथीलाई घर भित्र्याएँ...!
ARCHIVE, BLOG » जात ढाँटेर जव मैले दलित साथीलाई घर भित्र्याएँ...!
मलाइ अझै पनि सम्झना छ । एक दिन म बिक साथीको घरमा गएको कुरा घरमा मेरो हजुरबुवाको आमा, अर्थात मेरो जिजुमुमाले थाहा पाउनुभयो । उहाँले मलाई बिहानको एक छाक खानै दिनुभएन । म त्यतिकै स्कुल गएँ । म सानो छँदा बिक साथीको घरमा जाँदा मलाई तिर्खा नलागे पनि म पानी मागेर पिउने गर्थे । किनकि मैले पिएको पानीमा बिक साथीको परिवार खुसी देख्थें । मेरा अरु जातीका साथीहरु बिक साथीको घरमा जान मान्दैनथे । तर म हाँसीहाँसी साथीलाई एकपलपनि तिमी सानो सातिको छैनौ भनी महसुस गराउंथें ।
उनले मलाई भन्थिन्, 'तिमी ठूलो जातको भएपनि मलाई कति माया गर्छौ है सिमा । म ठूलो कसरी भएँ ? मलाइ नै थाहा थिएन । उनी त मेरी दिदि थिइन् । भय तिमी म भन्दा दिदी छेउ , मेरो लागि तिमी नै ठूलो हौ भन्थे। तेस्तै गरि म रुयको दिन अर्को मेरि एउटि सरिता बिक साथी सिन्धुलीबाट म र मेरो दुईवटी तामाङ साथीलाई भेटन आइन् ।
म अलपत्र परें । घरमा लैजाउ मलाईनै निकल्ने डर मैले साथीलाई तिम्रो जात ढाँट भनें । साथीले बिकलाई राइ बनाइन् । मैले मेरो घरमामा लगेर खाना खुवाएँ । संगै सुताएं पनि । त्यो पल रमाइलोनै भयो । तर गाउँमा हाम्री साथी तल्लो जाती भन्ने कुरा कहाँबाट थाहा पाएछन् कुन्नी, त्यसको २-३ दिनपछी त मेरै बेइज्जत गराइयो ।
एसिड पिडीत सीमा बस्नेतबारे यी ७ तथ्य, जुन तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ